Waa Maxay Danbi Qaran “State Crime”? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Cabdijabaar Sh. Axmed — January 21, 2020
Dembiyada ugu daran dunida casriga ah, macno kasta oo lagu fasiri-karo waa ficilo inta badan lagu kaco, la abaabulo oo ay ku kacaan dowladaha iyo saraakiishooda: tusaale ahaan, xasuuq, dambiyada dagaalka, jirdil iyo musuqmaasuq.
Marka loo fiiriyo Sharciga Denbi-baarista, dembiyada gobolka waa ficil ama ku guuldareysashada ficil ku xadgudbaya sharciga dambiyada ee gobolka ama sharciga caalamiga ah ee dadweynaha. Ujeeddooyinkaas awgeed, Ross (2000b) wuxuu ku qeexayaa “dowlad” inay tahay mas’uuliyiin la soo doortay lana magacaabay, xafiis-dowladeed, iyo hay’adaha iyo ururrada ka kooban aasaaska dowladda.
Tusaalooyinka Dembiyada Gobolka. Dembiyada waxaa lagu qeexi karaa sharciga oo loo adeegsaday qaab danbiyeed. Sidaa darteed, waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin dembiyo dowladeed. Waxaa baaro saraakiisha booliiska maxalliga ah, wakiillada gobolka, ama kuwa degmooyinka. Dembiyadaan waxaa ka mid ah waxyaabo ay ka mid yihiin: Weerar dad lagu xasuuqay, Afduub iwm.
Tusaale “……Wararka ka imaanaya gobolka Soomaali galbeed ayaa sheegaya in dad badan oo Soomaali ah lagu xasuuqay. Wararka ayaa sheegaya in 15 ruux oo Soomaali ah lagu dilay degaanka Daroolabuu, dilka waxaa si wadajir ah u gaystay shacabka Xabashida iyo ciidamadamada xabashidada oo wada socda, dadka la xasuuqay ayaa ahaa dad shacab ah oo go’doon ku ahaa deegaamada Oromiya. Dilkaan waxaa uu daba socdaa dilkii 150ka ruux ee Soomaalida ah lagu xasuuqay degaanka Awaday, dad ka badan 2 milyan oo Soomaali ah ayaa hada go’doon ku ah gudaha Itoobiya.” http://www.ilays.com/2018/01/xabashida-oo-xasuuqday-shacabka-soomaali-galbeed/ – Qoraalkaan ayaa ah qoraan ay qortay warbaahinta Ilays.com oo aan tusaale ugu soo qaatay ‘danbiyada gobolka.
Dowladnimada Itoobiya waxaa lagu xantaa inay tahay dowlad ay leeyihiin qabiilo gaar ah waliba labo qolo ‘Tigrey iyo Amxaaro’ qowmiyadaha kalena ay ka yihiin marti. Dowladnimada sharaf malahan haddii aysan ahayn mid u siman dhammaan dadweynaha kunool dalka.
Dowlad wanaaggu waa erey aan xad laheyn oo loo adeegsado suugaanta horumarka caalamiga ah si loo sharaxo sida hay’adaha dowliga ah ay u maareeyaan howlaha guud una maareeyaan ilaha bulshada. Dowladnimadu waa “geeddi-socodka go’aan qaadashada iyo hannaanka go’aannada loo dhaqan-galiyo (ama aan la dhaqan-gelin)”.
Dawladdu waa haay’ad ka hortag ah, iyadoo loo adeegsanayo hanjabaadda ciqaabta inay tahay aalad faa’iido u leh qaabeynta dhaqanka muwaadiniinteeda. Waa dhexdhexaadiye, oo turjumaysa rabitaanka bulshada ee xallinta khilaafaadka.
Marka loo fiiriyo Horumarka caalamiga ah, maamul wanaaggu waa hab lagu cabbiro sida ay hay’adaha dowliga ahi u maareeyaan howlaha guud una maareeyaan ilaha bulshada sida ugu wanaagsan. Dowladnimadu waa “geeddi-socodka go’aan qaadashada iyo hannaanka go’aannada loo dhaqan-galiyo (ama aan la dhaqan-gelin)”.
International State Crime Initiative http://statecrime.org/about-isci/about-state-crime/
Tags: Waa Maxay Danbi Qaran “State Crime”?
Next post Seeynisyahano Ogaaday Sababaha Keena Cirrada iyo Waxa Lagu Daaweyn karo
Previous post Daraasad 'talo muhiim ah' Kasoo Saartay Shahwada Ragga Geeriyooday